China PVC camera steel ngentambo mveliso kunye nabenzi | Bangyi
Intambo yePVC yentsimbi yentsimbi isetyenziswa ngokubanzi ngenxa yexabiso layo eliphantsi kunye nomgangatho olungileyo.
Igama elipheleleyo lePVC yiPOLYVINYL CHLORIDE, enokwandiswa okuhle; malunga nokuguquguquka, ukuxhathisa kwe-abrasion, ukumelana okuphezulu kunye nokushisa okuphantsi, ukusebenza kwayo kubi kancinci kune-PU, kodwa ixabiso liphantsi kakhulu kune-PU. ukuba umthengi akanazo iimfuno eziphezulu malunga nokumelana ne-abrasion kunye nokuthamba, unokukhetha uhlobo lwePVC.
Ukutyabeka ngeplastikhi kufuna iipropathi ezilungileyo zoomatshini kunye nokunxiba ukumelana Isebenzisa umatshini weplastikhi wokufudumeza ngokuthe ngcembe ukufudumeza kunye nokuthambisa iplastiki ye-pvc, kwaye ngokulinganayo isongele iplastikhi etyhidiweyo ye-pvc kumphezulu wangaphandle wentambo yocingo lwentsimbi, ngesikhunta esithile, kwaye ekugqibeleni yenze umphezulu ogudileyo weplastiki.
Umtya we-PVC owenziwe ngentsimbi ojikeleze intambo ujongeka umhle kwaye ubume buzinzile ngakumbi, obunokwandisa ubomi benkonzo yentambo. Imibala yentsontelo yocingo eyenziwe ngeplastikhi intambo imhlophe, imnyama, tyheli, luhlaza, bomvu, njalo njalo, kwaye inokudityaniswa ngemibala eyahlukeneyo yeplastiki ngokweemfuno zabathengi. Isetyenziswa ngokubanzi ekutsiba intambo, izixhobo zomzimba, intambo yokutyala, umgca wempahla, intambo yokubambelela, njl.
Ubungakanani kunye nombala wentambo eyenziwe ngeplastikhi eyenziwe ngeplastiki ngentambo inokwenziwa ngentando. Ucingo lwentsimbi lwangaphakathi lunokuba yintambo yocingo lwentsimbi okanye intsimbi yentsimbi. Inxalenye eyenziwe ngeplastiki inokukhusela intambo yentsimbi yangaphakathi yentsimbi ekumeni, kunye nobomi benkonzo ende kunye nokuma okuzinzileyo. Intambo eyenziwe ngocingo lweplastiki yentsimbi ine-anti-corrosion engabonakaliyo, eyi-3.5-5 amaxesha obomi beentambo zensimbi zentsimbi. Intambo yentsimbi eyenziwe ngocingo lweplastikhi inokuxhathisa ngokufanelekileyo ngenxa yokuba ucingo kunye nocingo, imicu kunye nemicu kwintambo yahlulwe ngokutyabeka, kwaye ubomi benkonzo iyi-1.5-2 yamaxesha eentambo zentsimbi eziqhelekileyo. Ukuxhathisa kokudinwa kwentambo yentsimbi eyenziwe ngoplastikhi ephindwe kabini kunentambo eqhelekileyo yentsimbi.
Igama lemveliso Intambo yePVC yentsimbi yentsimbi
Izinto eziphathekayo Ukwaleka: PVCIntambo yocingo lwentsimbi: intsimbi kwalenza / intsimbi engatyiwa 316/304/201,
Umphezulu weIntambo yocingo yentsimbi idiphu eshushu iqaqanjisiwe, i-electro iqaqanjiswa, ipolishiwe, ioyile yatyabeka, njl.
umbala Ecacileyo, eluhlaza, tyheli, bomvu, mnyama, bhlowu, mfusa, okanye njengeemfuno zakho
Ulwakhiwo lweIntambo yocingo yentsimbi 1 * 7/7 * 7/7 * 19/19 * 7, njl.
Izicelo Intambo yenqwelo moya; I-Automobile Clutch Cable, iiCandelo zoLawulo; Umnxeba wonxibelelwano, iintambo zokuzivocavoca, iintambo zentwasahlobo, iseyile yocingo ephothiweyo, umsebenzi wezandla, izixhobo zombane zasekhaya kunye nezinto zokwenza imveliso, iiwotshi kunye neewotshi, izixhobo zoomatshini, izixhobo zekhompyuter, njl.
Egqithileyo DB camera intambo yentsimbi
Okulandelayo: Intambo yeWimbi engenacingo
PVC Camera Isefu Steel Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo, Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Camera Camera Intambo,